फल्ने फुल्ने क्रममा कपिलको जीवनFilmyFanda: Nepal's No. 1 Entertainment news portal site
फल्ने फुल्ने क्रममा कपिलको जीवन
फिल्मी फण्डा । ‘द कपिल शर्मा शो’ भारतको धेरै नै रुचाइएको कार्यक्रम हो । भारतका चर्चित हास्यकलाकार कपिल शर्मा उक्त कार्यक्रम ‘द कपिल शर्मा शो’ मा व्यस्त रहेका छन् । उनको व्यवसायिक जीवन त सफल छ यसका साथै उनको नीजि जीवन पनि फल्ने फुल्ने क्रम जारी रहेको भारतीय संचार माध्यमले जानकारी दिएका छन् ।
१२ डिसेम्बर २०१८ मा कपिल शर्मा आफ्नी साथी गिन्नी चतरथसँग विवाह बन्धनमा बाँधिएका थिए । भारतीय समाचार एजेन्सीका अनुसार कपिल शर्माकी श्रीमती गिन्नी चतरथ गर्भवती छिन् । तर कपिल शर्मा र उनका परिवारबाट यसबारे कुनै आधिकारिक बयान भने सार्वजनिक गरिएको छैन । यद्यपी धेरैले उनीहरुको घरमा नयाँ पाहुनालाई स्वागतको तयारी सुरु भइसकेको बताइरहेका छन् ।
यो पनि पढ्नुहोस् : शाहरुख र आनन्दको सम्बन्ध
फिल्मी फण्डा । गत वर्ष शाहरुख खान अभिनित फिल्म “जिरो” फ्लप भयो । फिल्मले रिलिज अगाडी राम्रै चर्चा कमाएको थियो तर सफलता भने पाउन सकेन । फिल्ममा शाहरुखको साथ अनुष्का शर्मा र क्याटरिना कैफको अभिनय रहेको थियो। फिल्ममा ‘राँझणा’ , तनु वेड्स मनु’ जस्ता फिल्मका निर्देशक आनन्द एल राय निर्देशक रहेका थिए। यिनै कारणले फिल्मले रिलिज अघि राम्रै चर्चा बटुल्यो तर रिलिजपछि भने व्यवसायिक र समिक्षकीय असफलता दुबै बटुल्यो। जिरो २ सय करोड भारूको लागतमा बनाइएको फिल्म थियो। फिल्मले भारतमा सय करोडको आँकडा पार गर्न सकेनन भने विश्वव्यापी रूपमा यसको कमाइ १८६ करोडमा रोकियो।
फिल्मको असफलताको कारण शाहरुख र निर्देशक आनन्दबीच दुश्मनी सुरू भएको खबर सार्वजनिक भएको छ। फिल्म असफल हुनुको दोष शाहरूखले निर्देशक रायलाई दिएका छन्। आनन्दले के सोचेर फिल्म बनाइरहेका थिए ? शाहरुखको आनन्दप्रतिको वर्तमान सोच हो यो। सार्वजनिक खबर अनुसार शाहरुख र निर्देशक आनन्द दुबैको हाल बोलचाल बन्द भएको छ। यध्यपी उक्त खबरमा कुनै सत्यता नरहेको खबर पनि सार्वजनिक भएको छ। फिल्म जिरोको असफलता पछि शाहरूखले आफ्ना सबै प्रोजेक्टहरूलाई केहि समयका लागि स्थगित गरेका छन्। जसमा डनको तेश्रो सिक्वल पनि रहेको छ भने उनले भारतका प्रथम अन्तरिक्ष यात्री राकेश शर्माको वायोपिकबाट पनि हात झिकिसकेका छन्।
यतिबेला शाहरुख खान बेइजिङ इन्टरनेश्नल फिल्म फेसटिवलमा जिरोको प्रचार गरिरहेका छन्। उक्त प्रचारका क्रममा शाहरुखले दुर्भाग्यवशः जिरो नचलेको स्वीकार्दै सायद आफूले गलत फिल्म बनाएको हुनुपर्ने वा कथा भनेको शैलीमा गल्ती देखिएको बताएका छन्। यसका साथै उनले फिल्मको असफलताले आफू एक कदम पछि हट्न बाध्य भएको पनि बताए। उनले अब फिल्म गर्न केहि समय लिने बताएका छन्। शाहरुखले यस्तो बताइरहँदा उनी निकट एक श्रोतको हवाला दिदैं एक चर्चित बलिउड साइटले शाहरूख आनन्द रायको अनुहारसम्म नहेर्ने अवस्थामा रहेको लेखेको छ।
यो पनि पढ्नुहोस् : “लक्ष्मी बोम्ब”मा अक्षयको अवतार
फिल्मी फण्डा । बलिउड फिल्म “लक्ष्मी बोम्ब”को फर्स्ट लुक पोस्टर सार्वजनिक भएको हो । उक्त फर्स्ट लुक पोस्टरमा नायक अक्षय कुमारलाई निकै अलग अवतारमा देख्न सकिन्छ । पोस्टरमा अक्षय कुमार आफ्नो आँखामा गाजल लगाउँदै गरेको देखिएका छन् । फिल्ममा अक्षय ट्रान्सजेन्डर भूतको रुपमा देखिनेछन् । उक्त फिल्म तमिल फिल्म ‘कञ्चना’को हिन्दी रिमेक हो । तमिल फिल्ममा कञ्चनाको रोल आर शरद कुमारले निभाएका थिए । फिल्मको कहानीमा देखाइएको थियो कि, कञ्चना एक ट्रान्सजेन्डर महिला हुन्, जसले आफ्नो मृत्युको बदला लिनका लागि राघवको शरीर चुनेकी हुन्छन् । रिमेकमा अक्षयले कञ्चनाको भूमिका निभाउँदैछन् ।
यस फिल्ममा अमिताभ बच्चनले ट्रान्सजेन्डर भूतको भूमिका निभाउने चर्चा थियो । अहिले फिल्मको छायांकन धमाधम भइरहेको छ । फिल्मका निर्देशक राघव लारेन्स हुन् भने फिल्मलाई तुषार कपूर र शबीना खानले निर्माण गर्दैछन् । फिल्ममा अक्षय कुमारसँगै लिड रोलमा कियारा आडवाणी , आर माधवन र शोभिता धुलिपालाको पनि अभिनय रहने छ । फिल्म अर्को वर्षको ५ अप्रिलबाट रिलिज हुनेछ ।
यो पनि पढ्नुहोस् : ८३ मा रणवीरकी पत्नीको भूमिकामा देखिँदै दीपिका
फिल्मी फण्डा । फिल्म ८३ बाट नायक रणवीर सिंह र नायिका दीपिका पादुकोणको जोडी पुनः पर्दामा एकसाथ आउने भएको छ। फिल्ममा क्रिकेटर कपिल र रोमीको प्रेमकथालाई प्रस्तुत गरिनेछ । फिल्म सन् १९८३ मा भारतले क्रिकेट विश्वकप जितेको कथामा आधारित रहेको छ।
निर्देशक कबीर खानको निर्देशन रहने उक्त फिल्ममा दीपिकाले रणवीरकी पत्नीको भूमिका निभाउने भारतीय मिडीयाले जनाएका छन् ।
यो पनि पढ्नुहोस् : सुर्यवंशीमा खलनायकको रुपमा देखिँदै अभिमन्यू
फिल्मी फण्डा । निर्देशक रोहित शेट्टीको निर्देशनमा नयाँ फिल्म सुर्यवंशी निर्माण हुँदैछ । फिल्ममा नायक अक्षयकुमारको अपोजितमा अभिमन्यू सिंहले देखिने भएको छ । अभिमन्यूले यसअघि श्रीदेवी अभिनित फिल्ममा खलनायकको अवतारमा देखिएका थिए ।
उनले खलनायकको रूपमा राम्रो प्रशंसा पाएका अभिनेता हुन् । हाल फिल्मको सुटिङ चलिरहेको छ ।
यो पनि पढ्नुहोस् : भारतबाट कट्रिनाले राष्ट्रिय अवार्ड जित्लिन् त ?
फिल्मी फण्डा । अहिले चर्चामा रहेको फिल्म हो भारत । फिल्म भारत जुन ५ गतेबाट रिलिज हुँदैछ । फिल्ममा सलमान खान र कट्रिना कैफको मुख्य अभिनय रहेको छ । फिल्मको एकपछि अर्को गीत हित हुँदै गईरहेको छ । यस फिल्मको एक कार्यक्रममा सलमानले कट्रिनाको तारिफ गर्दै फिल्ममा निकै राम्रो काम गरेकी र यस फिल्मबाट कट्रिनाले राष्ट्रिय अवार्ड समेत जित्न सक्ने बताएको छ ।
फिल्ममा सलमानका अलावा कटरीना कैफ, दिशा पाटनी, ज्याकी श्राफ, सुनील ग्रोवर लगायतका कलाकारहरुको अभिनय रहेको छ । भारतलाई अली अब्बास जफरले निर्देशन गरेका हुन् ।
यो पनि पढ्नुहोस् : “दबंग थ्री”को आईटम गीतमा मलाइकालाई रिप्लेस गर्दै मोनी
फिल्मी फण्डा । २०१० मा रिलिज भएको ‘दबंग’को तेस्रो सिरिजको आईटम गीतमा मलाईका अरोडा हुने भएको छ । बलिउड सुपरस्टार सलमान खानको फिल्म दबंग थ्रीमा फिल्मको ओरोजिनल कास्ट सलमान र सोनाक्षी सिन्हा नै मुख्य भुमिकामा देखिनेछन् । तर यसपटक फिल्ममा मलाइका अरोडाको आइटम गीतमा नहुने भएको छ ।
भारतीय मिडीयाको अनुसार दबंग थ्रीको आईटम गीतमा मलाईका अरोडालाई नायिका मोनी रोयले रिप्लेस गर्ने भएकी छिन् । दबंग थ्रीको उक्त गीत अर्को हप्ता वसई स्टुडियोमा सुट हुनेछ ।
यो पनि पढ्नुहोस् : ‘भारत’को “जिन्दा” (गीत)
फिल्मी फण्डा । बलिउडको बहुप्रतिक्षित फिल्म ‘भारत’को “जिन्दा” बोलको गीत सार्वजनिक भएको छ । भिसाल दडलानीको स्वर रहेको उक्त गीतमा एलि अबास जफरको शब्द रहेको छ भने भिसाल दडलानी , एलि अबास जफर र जुलियसको संगीत रहेको छ । उक्त गीतमा देश भक्ति भाव समावेश गरिएको छ भने गीतको भिडियोमा नायक सलमान खानलाई विभिन्न अवतारमा देखाइएको छ ।
गीतको भिडीयोमा सलमान खान , कट्रिना केफ , सुनील ग्रोवर लगायत अरु कलाकारलाई फिर्चड गरिएको छ । फिल्मको “स्लो मोसन” र ‘चास्नी’ बोलको गीत दर्शक माझ निकै चर्चित भईसकेको छ ।।फिल्ममा सलमानका अलावा कटरीना कैफ, दिशा पाटनी, ज्याकी श्राफ र सुनील ग्रोवर लगायतका कलाकारहरुको अभिनय रहेको छ । भारतलाई अली अब्बास जफरले निर्देशन गरेका हुन् । फिल्म ५ जुनबाट रिलिज हुँदै छ ।
यो पनि पढ्नुहोस् : आलिया बनिन् आक्रोशित
फिल्मी फण्डा । बलिउड नायक रणवीर कपुर र नायिका आलिया भट्ट प्रेम सम्बन्धमा छन् भने चर्चा चलने गरेको छ । हालै मात्र रणवीर र आलिया होलिडे टुरका लागि भारत बाहिर पुगेका थिए । उनीहरु गएसँगै भारतीय मिडियामा भने थुप्रै खालका चर्चा चलेको थियो । कतिपयले उनीहरु बिहेका लागि उपयुक्त स्थान खोज्नका लागि गएको समेत चर्चा गरे ।तर नायिका आलिया भट्टले भारत फर्किएसँगै यसको जवाफ दिएकी छिन् ।
उनले जे पनि । यो खराब शैली हो । हामी होलिडे मात्र मनाउन गएका थियौ । मानिसहरु जे चाहन्छन् त्यही नै भन्छन् भनेकि थिइन् । आलिया र रणवीरको अहिले नै बिहे गर्ने कुनै योजना नभएको भारतीय मिडियाले उल्लेख गरेका छन् । आलिया र रणवीरले बिहे गर्ने खबर सार्वजनिक भैरहेको छ भने होलिडे मात्र मनाउन गएको कुरालाई नचाहिदो हल्ला गरिएको भन्दै आलिया आक्रोशित बनेकी छिन् ।